MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanada Gollaha Shacabka, ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah dooranaya gudoomiye cusub, kadib markii 9-kii bishan uu xilkaasi iska-casiley Maxamed Cismaan Jawaari.
Doorashada ayaa ka dhacaysa xarunta Baarlamaanka ee Muqdisho, waxaana ku sugan dhamaan Xildhibaanada, Musharaxiinta u tartamaya xilka oo gaaraya 11 kuwaasi oo ay kamid yihiin illaa wasiirro iyo ku xigeenno.
3- Xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen
8- Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
11-Xildhibaan Iimaan Cabdullaahi Nuur
Musharaxiinta ayaa waxay dhamaan kasoo wada jeedaan maamulka Koonfur Galbeed, waxaana tartanka uu noqon doonaan mid adag, maadaama ay ku jiraan musharaxiinta taageero ka helaya dhinacyada Siyaasadda dalka ku loolamaya.
Warar hoose oo Warsidaha Garowe Online uu helayo ayaa sheegay in Musharaxiinta uu kamid yahay Wasiir hore oo welwel weyn ka qabto inuu kusoo baxo tartanka doorashada gudoomiyaha Gollaha shacabka. Halkan akhri.
UPDATE: Sheekh Aadan Madoobe oo ku dhawaaqay inuu ka baxay tartanka doorashada gudoomiyaha Gollaha Shacabka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan kulan uu la qaatey Jawaari kala hadlay...